Vaovao - Tatitra IEA: Manampy 156GW ny Global PV amin'ny 2021!200GW amin'ny 2022!
Ny International Energy Agency (IEA) dia nilaza fa na dia eo aza ny fiakaran'ny vidin'ny entana sy ny fiakaran'ny vidin'ny famokarana, ny fivoaran'ny photovoltaic solar manerantany amin'ity taona ity dia mbola antenaina hitombo 17%.
Any amin'ny ankamaroan'ny firenena eran'izao tontolo izao, ny tetikasa fampiasa amin'ny masoandro dia manome ny vidiny ambany indrindra amin'ny jiro vaovao, indrindra amin'ny trangan'ny fiakaran'ny vidin'ny entona voajanahary.IEA dia maminavina fa amin'ny 2021, 156.1GW ny fametrahana photovoltaic dia ampiana eran-tany.
Izany dia maneho firaketana vaovao.Na izany aza, io tarehimarika io dia mbola ambany noho ny andrasana amin'ny fampandrosoana sy ny fametrahana.Ny institiota fikarohana BloombergNEF dia maminavina fa 191GW ny angovo azo avy amin'ny masoandro vaovao dia hapetraka amin'ity taona ity.
Mifanohitra amin'izany kosa, ny taham-pahavitrihana azo avy amin'ny masoandro ao amin'ny IHS Market amin'ny taona 2021 dia 171GW.Ny drafitra fampandrosoana antonony natolotry ny fikambanana ara-barotra SolarPower Europe dia 163.2GW.
Ny IEA dia nanambara fa ny fihaonambe momba ny fiovan'ny toetr'andro COP26 dia nanambara ny tanjona angovo madio kokoa.Miaraka amin'ny fanohanana matanjaka ny politikan'ny governemanta sy ny tanjon'ny angovo madio, ny photovoltaic solar dia "mitoetra ho loharanon'ny fitomboan'ny angovo azo havaozina."
Araka ny tatitra, amin'ny taona 2026, ny angovo azo havaozina dia hahatratra efa ho 95% amin'ny fitomboan'ny herin'aratra eran-tany, ary ny photovoltaic solar fotsiny dia hahatratra ny antsasany mahery.Ny totalin'ny fahafahan'ny photovoltaic napetraka dia hitombo avy amin'ny 894GW amin'ity taona ity ho 1.826TW amin'ny 2026.
Eo ambanin'ny foto-kevitry ny fampandrosoana haingana dia hitombo hatrany ny fahaiza-manao vaovao isan-taona amin'ny masoandro photovoltaic, mahatratra efa ho 260 GW amin'ny 2026. Ny tsena lehibe toa an'i Shina, Eoropa, Etazonia ary India dia manana taham-pivoarana lehibe indrindra, raha toa kosa ny tsena vao misondrotra toy ny Afrika atsimon'i Sahara sy Afovoany Atsinanana koa dia mampiseho taham-pivoarana lehibe.
Fatih Birol, Tale Mpanatanteraka ao amin'ny IEA, dia nilaza fa ny fitomboan'ny angovo azo havaozina tamin'ity taona ity dia nametraka firaketana, izay mampiseho fa misy famantarana iray hafa mipoitra amin'ny toekarena angovo eran-tany vaovao.
"Ny vidin'ny entana sy angovo avo lenta hitantsika ankehitriny dia mametraka fanamby vaovao amin'ny indostrian'ny angovo azo havaozina, fa ny fiakaran'ny vidin'ny solika fôsily dia mahatonga ny angovo azo havaozina hifaninana kokoa."
Nanolotra drafitra fampandrosoana haingana ihany koa ny IEA.Ity tetika ity dia mihevitra fa ny governemanta dia namaha ny olan'ny fanomezan-dàlana, ny fampidiran-dresaka, ary ny tsy fahampian'ny karama, ary manome fanohanana ara-politika voatondro ho an'ny fahaleovan-tena.Araka io drafitra io, 177.5GW amin'ny photovoltaic solar dia haparitaka maneran-tany amin'ity taona ity.
Na dia mihamitombo aza ny angovo azo avy amin'ny masoandro, ny tetikasa angovo azo havaozina vaovao dia heverina ho ambany lavitra noho ny isa ilaina mba hahatratrarana ny tanjona entona aotra eran-tany amin'ny tapaky ny taonjato.Araka io tanjona io, eo anelanelan'ny 2021 sy 2026, ny salan'isa fitomboana amin'ny famokarana angovo azo havaozina dia saika avo roa heny noho ny toe-javatra lehibe voalaza ao amin'ny tatitra.
Ny tatitry ny sainam-pirenena momba ny World Energy Outlook navoakan'ny IEA tamin'ny Oktobra dia mampiseho fa ao amin'ny tondrozotra 2050 net zero emission an'ny IEA, ny salan'isa isan-taona isan-taona amin'ny photovoltaics masoandro manomboka amin'ny 2020 ka hatramin'ny 2030 dia hahatratra 422GW.
Ny fiakaran'ny vidin'ny silisiôma, vy, alimo ary varahina dia antony tsy mety amin'ny vidin'ny entana
Ny IEA dia nanambara tamin'ny tatitra farany fa amin'izao fotoana izao, ny fiakaran'ny vidin'ny entana dia nampiakatra ny fanerena ny vidin'ny fampiasam-bola.Ny famatsiana akora fototra sy ny fiakaran'ny vidin-jiro any amin'ny tsena sasany dia nanampy fanamby fanampiny ho an'ny mpanamboatra photovoltaic solar ao anatin'ny fotoana fohy.
Hatramin'ny fiandohan'ny taona 2020, ny vidin'ny polysilicon photovoltaic-grade dia nitombo avo efatra heny, nitombo 50% ny vy, nitombo 80% ny alimo, ary nitombo 60% ny varahina.Fanampin’izany, nisondrotra avo folo heny ny tahan’ny entana avy any Chine ka hatrany Eoropa sy Amerika Avaratra, indraindray.
Tombanan'ny IEA fa manodidina ny 15% amin'ny totalin'ny vidin'ny fampiasam-bola amin'ny fotovoltaika masoandro ny vidin'ny entana sy entana.Araka ny fampitahana ny vidin'ny entana antonony manomboka amin'ny taona 2019 ka hatramin'ny 2021, ny vidin'ny fampiasam-bola amin'ny ankapobeny ho an'ny orinasa mpamokatra herinaratra photovoltaic dia mety hiakatra 25%.
Ny fiakaran'ny entana sy ny entana dia nisy fiantraikany tamin'ny vidin'ny fifanarahana amin'ny tolo-kevitry ny governemanta, ary ny tsena toa an'i Espaina sy India dia nahita ny vidin'ny fifanarahana tamin'ity taona ity.Ny IEA dia nanambara fa ny fiakaran'ny vidin'ny fitaovana ilaina amin'ny famokarana herinaratra photovoltaic dia mametraka fanamby ho an'ireo mpamorona izay nahazo ny tolo-bidy ary manantena ny fitontongan'ny vidin'ny module.
Araka ny voalazan'ny IEA, manomboka amin'ny taona 2019 ka hatramin'ny 2021, manodidina ny 100GW amin'ny tetikasa solar photovoltaic sy angovo azo avy amin'ny rivotra izay nahazo tolo-bidy nefa tsy mbola niasa dia miatrika ny mety hisian'ny fahatafintohinana amin'ny vidin'ny entana, izay mety hanemotra ny fametrahana ny tetikasa.
Na eo aza izany dia voafetra ihany ny fiantraikan'ny fiakaran'ny vidin'entana amin'ny fitakiana fahafaha-manao vaovao.Ny governemanta dia tsy nanao fanovana politika lehibe hanafoanana ny tolo-bidy, ary ny fividianana orinasa dia manapaka ny firaketana isan-taona.
Na dia misy aza ny loza mety hitranga amin'ny vidin'ny entana avo lenta, ny IEA dia nanambara fa raha mihena ny vidin'ny entana sy ny entana atsy ho atsy, dia hitohy ny fironana midina amin'ny vidin'ny photovoltaic solar, ary ny fiantraikany maharitra amin'ity fitakiana teknolojia ity. mety ho kely dia kely koa izany.
Jiro masoandro, Jiro tondra-drano amin'ny masoandro, Jiro Masoandro tsy tantera-drano, Tendrombohitra jiron'ny Solar Street, Flash jiro mandeha amin'ny masoandro, Jiro masoandro amin'ny dobo filomanosana,